ယူနန်ကသင်္ကြန် – ၂၀၁၅ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ယူနန်ကသင်္ကြန် – ၂၀၁၅	15
ယူနန်ကသင်္ကြန် – ၂၀၁၅
Posted by Kyaemon on May 9, 2015 in Arts & Humanities, Cultures, Education, Entertainment, Environment, Ethnic Groups, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel | 15 comments
Yunnan Water Festival 2015
ဟောစာတမ်းများအရ သင်္ကြန်ချိန်ခါ သာမယမှာ
မြန်မာပြည် ကို နှစ်စဉ်ကြွမြန်းနေကျ
ဦးမာဃ ကိုယ်တော်က ဒီတခါကျတော့
ချွေရံသင်းပင်း အလုံးအရင်း ခြံရံလျက်
အနားက တပည့်ကျော် ဝိရသူနတ်သား လားမသိ၊
ထိုင်းလူမျိုးစု (ရှမ်း) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရာ
ယူနန်ပြည်နယ် ဂျင်ဟောင် မြို့က
ရှမ်းအမျိုးသမီး တွေက အ”က” နဲ့ကြိုပြီး
ရှမ်းအမျိုးသားတွေကလဲ အိုးစည် ဗုံမောင်း
နဲ့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုကြတယ်၊
ကောင်းကင်က အဆင်းမှာလဲ တခမ်းတနားနဲ့ ရှိုး အပြည့်နဲ့ဆင်းသက်
မြင်ကွင်းကျယ် ဓာတ်ပုံမှာ လွင်ပြင်ကြီးရယ် နောက်က
မိုးမျှော်တိုက်အစုလိုက်ရယ် တောင်တန်းကြီးရယ် မြင်ရတာက စုံလို့ဘဲ ======
ထိုင်းဂျင်ဖောလူမျိုးစု (ရှမ်းကချင်) ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရာ
ယူနန်ပြည်နယ် မန်ရှီ မြို့က ဟန်ပါပါ
ယူနန်ပြည်နယ် မန်ရှီ မြို့က ရှမ်းသူမ တွေ က
စီတန်း “က” ပြ ဖျော်ဖြေကြတယ်
မြန်မာနယ်စပ်နားက ဂျင်ဂူ အရပ်က ဘုရားပန်းတွေပူဇော်
ယူနန်ပြည်နယ် မန်ရှီ မြို့က သင်္ကြန်ဖွင့်လှစ်ပွဲ အခမ်းအနား
အရီးနဲ့အန်ကယ်ကြီးတို့ကဆွေးနွေးသွားတဲ့ အနောက်တိုင်းဆန် “ဆေးစိုးဆံပင် စုတ်ဖွားဖွား” ကလေးတွေကိုမြင်ဘူးတယ်လို့ရှိအောင်၊
မြစပဲရိုး says: ပုံ (၁) က မီးခိုး ရောင်စုံမျိုး အခု မှ တွေ့ဖူးတယ်။ လှသား။
ပုံ(၂) မှာ မျိုးကျော့မြိုင် လဲ ဝင်ပြီး ဆင်နွဲတယ်ကိုး။
ခမောက်တွေ ထီးတွေ ကလဲ ဒီ ကနဲ့ ဆင်တာဘဲ။
အဲဒီမှာ ပိုပြီး ကြည့်ကောင်းတာက လူ တွေ ရဲ့ ခေါင်းမှာ ဆိုးဆေး တွေ မရှိတာဘဲ။
. မြန်မာပြည်ထဲ လူတော်တော်များများ က ဆံပင် ဆိုး တာ ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရတာ ခပ်စုတ်စုတ် နဲ့ အဆင့် မရှိဘူး။ ကြည့်လို့ ကို အဆင်မပြေဘူး။
လမ်းဘေး ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ ကလေး ကလဲ ဆံပင် အဝါ နဲ့။
. ခေတ် ဆိုလဲ ခေတ်ပေမဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ် လှလှလေး မြင်ရတာ တော်သေး။
အခုတော့ ကိုယ်နဲ့ လိုက်မှန်း မလိုက်မှန်းမသိ။
uncle gyi says: မြန်မာမှာကအတုခိုးမှားတယ်ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်အရီးရယ်
Alinsett @ Maung Thura says: .တော်သေးးးးးး ..အဲဒီအချိန် ယူနန်နယ်ထဲကို ဝုန်းခနဲကြီး ပြုတ်ကျမလာသေးလို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14469
kai says: အဲဒီစိန့်ပြည်က ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရဒေသကိုင်တွယ်ပုံ.. မြန်မာတွေလေ့လာဖို့ကောင်းတယ်..။
ယူနန်က.. တိုင်းရင်းသားတွေ… မြန်မာတွေထက်…မြန်မာဆန်နေကြ…ပေါ့…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 966
Kyaemon says: kai says:
အဲဒီစိန့်ပြည်က ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရဒေသကိုင်တွယ်ပုံ.. မြန်မာတွေလေ့လာဖို့ကောင်းတယ်..။
ဒါမှ ကမ္ကာ မှာ အကြာဆုံးလို့ကျော်ကြားနေတဲ့ အနှစ် ၇၀ နီးပါး
Kyaemon says: မြစပဲရိုး says:
မြန်မာပြည်ထဲ လူတော်တော်များများ က ဆံပင် ဆိုး တာ ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ပြီး ကြည့်ရတာ ခပ်စုတ်စုတ် နဲ့ အဆင့် မရှိဘူး။ ကြည့်လို့ ကို အဆင်မပြေဘူး။
uncle gyi says မြန်မာမှာကအတုခိုးမှားတယ်ပြောရမယ်ထင်ပါတယ် —————–
Ma Ma says: ဆံပင်ဆေးဆိုးပြီး ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ပုံစံတွေ လုပ်ကြတာအထိတော့ လူငယ်တွေကို သူ့ခေတ်နဲ့သူလို့ နားလည်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
မူးရူးရမ်းကားတာတွေ ရိုင်းစိုင်းတဲ့အပြုအမူတွေကိုတော့ မကြိုက်ဘူး။
လူအုပ်ကြီးထဲကို ရေလောင်းချတာ သဘောကျတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: သင်္ကြန်ကို ပြန်လွမ်းမိ
ခင်ဇော် says: မြင်ရတာ ပျော်စရာ
naywoon ni says: ပုံ​တွေကြည့်​ရတာ မသိရင်​​တော့ ဗမာပဲ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ယဉ်ကျေးပါပေ၏
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရွှေလီသင်္ကြန်းကတော့ ဒီနှစ်ဆုံလိုက်ရတယ် မြန်မာသင်္ကြန်နဲ့အတူတူ ရေဘောလုံးနဲ့ထုတာဘဲ ပိုတယ်
Kyaemon says: ဆရာပေါက်
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ယူနန် သင်္ကြန်ကလည်း
အတော် စည်ကားခဲ့တာပဲဗျနော့ …
ဟိုလူအုပ်ကြီး ကတော့ဖြင့် အတော့်ကို ကြီးတာပဲ ..
ဦးကြောင်ကြီး says: တြုတ်သဘုံကျေးမှုံဂျီး… လောက်ကိုင် အခြေအနှေ ဗိုလ်ရှိသဒုံး…